Tsy voafehin’i Andry Rajoelina ny firenena – MyDago.com aime Madagascar
Tsy voafehin’i Andry Rajoelina ny firenena
tsy voafehin'i Andry Rajoelina ny firenena
Ankoatran’ny fifanandrinana politika saika ho isan’andro, ny olana amin’ny tsy fisian’ny fanehoan-kevitra malalaka eto amin’ny tany sy ny fanjakana, ny tsy famelana ny mpanohitra haneho hevitra malalaka na eny kianja na any amin’ny haino aman-jerim-pirenena,ny famonjana ireo mpanohitra, ny tsy fandriam-pahalemana izay manjaka sy tsy voafehin’ny mpitandro filaminana eran’ny Madagasikara, ny kolikoly sy ny asa maizina mahazo vahana indrindra any amin’ny biraom-panjakana, ny tsy fisian’ny rotsak’orana izay mampitabataba ny tantsaha mpamboly vokatry ny doro-tanety izay nanjaka tanteraka roa taona izay, ny tsy fahafehezan’ny fanjakana ny morotsiraka, fari-dranomasin’i Madagasikara izay tadiavin’ireo piraty Somaliana hanaovana asa-ratsy, ny fanaovana tantely afa-drakotra ny harena voa-janaharin’ny firenena, ny fitotongan’ny toe-karena anaty lavaka tanteraka, ny fahalovan’ny fomba fisainana indrindra any anivon’ny toby sy kaserna isan-karazany any izay tsy mijery afa-tsy ny vola vola ihany, sns…
Manginy fotsiny ireo fa ny tena mihantra amin’ny fiainan’ny vahoaka amin’izao fotoana izao dia ity fiakaran’ny vidin’ny ny entana ilaina amin’ny an-davan’andro ity (PPN).
Raha nanao fampanantenana ny hampidina ny vidim-bary ho 500 Ar ny kilao i Andry Rajoelina tamin’ny tolona nataony tetsy amin’ny kianjan’ny 13 Mai izao lasa 500Ar nykapoaka, dia hita fa fampandriana adrisa fotsiny ireny.
Io fa mitranga indray izany raha nanao ny « tsena mora » izy fa dia herin’andro vitsivitsy monja dia nanjavona izany, ary vao mainka aza ratsy fa dia nampiakatra ho 1500 Ar/Kg ny vidim-bary ny fisian’ity tsena mora ity.
May Ambondrona koa dia nampiantso ireo mpandraraha momba ny vary izy mba hampidina ny vidim-bary hono, toa resaka mandany jiro fotsiny anefa ny an’ity filohan’ny FAT ity fa tsy voahaja indray ilay tolotra 1180 Ar/Kg eny an-tsena .
Vao ny voalohan’ny herin’andro teo koa dia nisondro-bidy indray, ka lasa 2540 ariary ny iray litatra amin’ny gazoala. Etsy an-daniny ireo vahoaka madinika nametraka an’i Andry Rajoelina teo amin’ny fitondrana, vahoaka natao sorona hahazoana ny fitondrana, ireo Tanora Gasy Very asa izay lasa manao bizna sy mivarotra amoron-dalana voahenjika hatrany an’elakelatrano ary hampiasan’ny mpiasan’ny Kaomina herisetra mihitsy, izay velo-taraina fatratra ankehitriny fa matin’ny amboakely tiany .Eo koa ny asan- devoly amin’ny fiangonana iray izay nakaton’ny fitondrana teo aloha, nosokafan’i Andry Rajoelina ary nanenjehina ny filoha Ravalomanana mafy no indro « lasa matsatso » namoa-doza, voazimbazimba izay noheveriny ho masina ary tena nampiseho mibaribary ny antony mitombina sy ara-drariny ny fanakatonana izany teo aloha.
Ireo rehetra ireo no ilazanay fa tsy voafehin’i Andry Rajoelina ny firenena.Tsy nisy vahoaka nifidy sy nametraka azy hitantana ny firenena anefa fa izy sy ny miaramila no « nanositra ny tenany » ho mpitantana.Roa taona izay no lasa ary hita fa tsy voafehy ny firenena, inona no andrasany andraisana fanapahan-kevitra hentitra hametra-pialana?
Andrasana izay fanadiovan-tena hataony amin’ny teny tsara lahatra sy kabary ambony vavahady amin’ny Zoma izao etsy Mavolaha !
Tsy ampy taona hitantana firenena akory i Andry Rajoelina
Ampifangaroan’i Rajoelina ny mitantana firenena sy ny mitantana fianakaviana ary ny namana !
Auteur Solo RazafyPublié le 12 janvier 2011 12 janvier 2011 Catégories Malagasy, Politique
17 réflexions sur « Tsy voafehin’i Andry Rajoelina ny firenena »
Ekena ary mitombona avokoa ny voalazanao. Manampy an’ireo dia hoe TENA TSY SITRAK’ANDRIAMANITRA mihitsy izao fitondran’ny FAT izao. Miseho ho azy tsy mila anontaniana na mila porofo daholo ny tsy fahamarinana rehetra nataon’ity fitondrana FAT ity. Fotoanan’ny fieritreretana lalina ho antsika malagasy izao miseho izao. Ambarako fa tena sazin’A/tra mihitsy no mianjady amintsika ankehitriny, satria efa nanao izay tsy mendrika sy tsy mihaino ny feon’A/tra isika, nandritr’ireny fanonganam-panjakana nataon’olom-bitsy tia tena ireny, mandraka ankehitriny. Ho ravàn’A/tra toa an’i Sôdôma sy Gômoro ity Firenentsika ity raha tsy mibebaka sy mifona amin’A/tra isika, ka miverina amin’ny FAHAMARINANA sy FAHATAHORANA AN’ANDRIAMANITRA. Tsy mandatsa aho akory raha milaza fa voan’ny nataony daholo ireo vahoaka nanohana an’i Andry Rajoelina tamin’ireny grevy ireny,ka niteha-tanana tamin’ny nialan’ny Filoha Ravalomanana. Aiza isika izao ankehitriny ? ary aiza ry Andry Rajoelina izay nilokaloka fa hampiakatra ny fari-piainan’ny malagasy ary hampanjaka ny fahamarinana, ny fahalalahana, ny demokrasia ? aiza izy izao ? ary aiza ho aiza no misy anao ? Anjaran’ny tsirairay ny mamaly izany araka ny tandrifiny avy. Fa amiko Andry Rajoelina sy ny forongony dia miandry ny fitsaran’A/tra azy noho ny heloka vitany, toy izany koa ireo Mpiara-homana aminy ao (ireo manamboninahitra miaramila, mpitsara voavidy vola, mpanao politika misolelaka aminy…) Aleo A/tra no hiady ho antsika fa isika kosa hangina. Tokony hifona sy hibebaka isika mba hiverenan’ny fahamarinana, hisian’ny fitsarana mari-pototra ka tsy hanao fitsara-mitanila, hisian’ny fandriampahalemana, hisian’ny ranon’orana ahazoana mamboly, hiverenan’ny FITONDRANA ARA-DALANA EKEN’NY REHETRA, hitsaharan’izao fitondrana tsy nofidim-bahoaka izao fa manora-tena toa voatango ary tsy mahalala afa-tsy ny fangoronan-karena, ny hijoroan’ny manampanahy rehetra amin’ny FAHAMARINANA (Mpitondra fivavahana, ny Fiangonana, ny Fitsarana, ny Miaramila, ny Mpanao Politika, ireo Manam-pahaizana …). Dia samia ho tahian’A/tra eh !
Tsy voafehin’i maivandoha sy Sahobakaka ny firenena.
12 janvier 2011 à 13 h 27 min
izaho zany te hilaza hoe aoka izay ny constat am zavatra tsy mandeha eto am Firenena noho hafitsoky ireto FAT ireto. Efa roa taona no nahitantsika anzany. Maninona raha mba solution amzay no hoentintsika eto? Inona no hatao handrodanana izao fitondrana sandoka zao? aiza ny lalana iverenana am tany tan-dalàna heken’izao tontolo izao? Amiko manaiky avokoa isika matoa tsy mihetsika ary hihomehezan’ny FAT fotsiny satria lasa toa hoe be taraina fotsiny. Aleo korontanina rizareo satria mitovy ihany ny ho vokany. Milamina isika miharendrika ny firenena, manakorontana ireo FAT ireo isika mety mba ho taitra ny FAT hiala eo satria tsy voafehiny ny hatezeram-bahoaka ary tsy maintsy hiditra antsehatra ny fianakaviambe iraisampirenena. Inona am ireo no tiantsika? Aleo asiana Action fa tsy zaka intsony kah izany hoe ilay cas faharoa izany no lalana tokony hizoran’ny tolona raha izaho. Sa ahoana hoy ianareo? mahereza ô!
ramichaka dit :
izay le ataoko hoe mba mihaino tsara fa aza manaratsiratsy olona eo.
i Rajoelina tsy nampanantena vary 500 ariary izany ny kilao, fa hozizy hoe rehefa azontsika ny fitondrana dia ataontsika 500 ny KAPOAKAn’ny vary. dia tanteraka ny fampanantenana nataony.
Tena marina ny teninao Ramichaka: 500Ar. ny kapoaka no fampanantenana fa tsy 500 Ar. akory ny kilao!…. Izany no tena atao hoe « amateurisme doublé d’une utopie aberrante et subjectie »!
Dia mbola gaga ihany aho raha misy malagasy misaina ka manohana an’izao fitondrana izao (fitondrana hoy aho fa tsy fanjakàna, sasanangy samihafa mihitsy ireo)!
ha ha ha ha ha ts voafehiny koa tsy alainareo mahafehy azy ,mampimeh be ianareo
Ô ry rasoanaivo ô !
I domelina sy ny forongony, ireo mpiandry avy ao amin’ny FPVM ve no manota, dia izahay no tsy maintsy hibebaka sy hifona amin’Andriamanitra ?
Mbola ampianao indray hoe, aok’Andriamanitra no hiady ho antsika, fa isika kosa tokony hangina !
Tsy milaza ve izany hoe, mipetraha fa avelao ny Faty hanjakazaka ?
Tsy misy hidiran’Andriamanitra izay zava-miseho ao Madagasikara ; ny fantatra dia jiolahy no manjakazaka ao, ary tsy miraharaha sy matahotra an’izany Andriamanitra izany, na mody misy mandeha mivavaka aza !
Roa taona izay no nivavaka sy nitolona ny vahoaka, na mangatsiaka na migaingaina ny hain’andro, tsy hita vokany !
Afaka mivavaka any ampiangonana na any an-tranony ny olona, fa ho fanampin’izany dia, HETSIKA HAFA ( MIFANARAKA AMIN’NY ARA-ADALANA SY NY ZON’OLOMBELONA ) IZAO NO TENA HILAINA !!!!!
kay ikintana ,devoly lava rambo,aiza misy zavatra ts hidiran’Andriamanitra r’ise?dia mba ts mifidy vava avoka koa i se zany ka
12 janvier 2011 à 20 h 53 min
Hi! Hi!Mampme ahy ity kristelle ity, hita fa actricen´ny FPVM koa ity Kristelle ity.
efa nahita ilay video aho vao tena azoko hitako ra-kristelle no tsy tia ny dadanay hay kil-FPVM, nalahelo fa nakaton´ny SEM President voafidim-bahoaka. Marc Ravalomanana.
kristelle actrice FPVM Beuuuuuuuuuuurrrrrrrrrkk!
MDR aho ravelomanantsoa !!!!
13 janvier 2011 à 7 h 03 min
Zao fotsiny ny ahy no fantatro tanteraka ny hiran’ilay Sahona Reraka hoe « tsy takatry ny kely vola izao ny atody » fa i Sahona Reraka kosa amin’zao mahavidy tsara. Satria efa tsy androrosy intsony, mpitantango toaka sy sigara amana’olona fa efa mihinana ny volan’ny Gasy
13 janvier 2011 à 13 h 14 min
Eny eh ! tsy omen-tsiny Ianao ry Kintana satria tsy ho takatrao ny herin’ny vavaka !??. Tahaka ny fahalaviran’ny atsimo @ avaratra no tsy ahatakaranao izany. Nefa tokony ho tsapanao ihany fa efa misy vokany ary azo tsapain-tanana ny valim-bavaka omen’A/tra antsika ankehitriny. Efa miseho tsikelikely ny marina sy ny zava-mihafin’ny affaire fanonganam-panjakana nataon’ireo FAT ireo! Iza amintsika no nieritreritra fa Ry Charles sy ry Noel Rakotonandrasana no higadra sy hiditra amponja ? Minoa Ahy ianao fa tsy ho ela ihany koa ny anjaran’ireo Mpandroba firenena sasany ireo ?! Izay ilay hoe A/tra no hiady ho antsika. Tsy mila mitaky na manao fihetsiketsehana mahery vaika akory isika dia niditra amponja ireny olona izay tena nampiseho ny habibiany nandritra ireny fotoana tao Antanimena ireny ! Izany akory tsy miteny hoe dia tsy ihetsika isika ! fa anisan’ny hetsika tsy hay tohaina ny herin’ny fivavaka. Ankehitriny iza no tsy mahalala fa manomboka tsy sahy miseho vahoaka noho ny henatrany ireo FAT ireo ! Ianao ve dia tsy mahafantatra fa mihen-danja sady efa manomboka halaim-baraka eo anivon’ny fiaraha-monina Malagasy sy eo anivon’izao tontolo izao ireo FAT ireo ? Taiza no mbola nisy Malagasy tsy manaiky fampihavanana izany ? raha tsy ireo FAT ireo ! satria matahotra ny fahamarinana izy ireo. Maty ho azy ary henjehin’ny eritreriny samy irery eo ireo. Efa maro amin’ireo anie no matahotra sao azon’ny tsiny eh ! Efa maro amin’ireo no te-hiala amin’ny faharatsiana sy ny fahalovana niainany ankehitriny fa saingy voafatotra ary matahotra sao voan’ny sazy henjana tahaka ireo efa mizaka izany sazy izany ankehitriny. Maro amin’ireo no azon’aretina tsy fantatra ary tsy sitram-panafody, ary henjehin’ny ratsy nataony ka tra nenina fa saingy miandry ny saziny (na ho fahafatesana, na ho figadrana, na takaitra vokatry ny haretina mahazo azy …), maro amin’ireo no tsy manampiadanana noho ny fangoronan-karena amin’ny tsy marina sns. Te hankahery antsika rehetra Aho hoe « alohan’ny hetsika rehetra hatao, dia aleo aloha mivavaka manontany ny hevitr’A/tra ». Ilaina ny hetsika nefa tsy mety ihany koa ny tsy mailo, na entim-po fotsiny. Tsy manana fiadiana akory isika, nefa hihatrika ireo miaramila miravaka fitaovam-piadiana mamono. Ny fitaovam-piadiana mahomby hananantsika dia ny vavaka ihany ampiana finoana ary tsy mahazo mihambahamba amin’izany. Ireo miaramila mitampiadiana ireo anie ka efa mihamalemy ankehitriny satria tsy afa-miala amin’ny fahorim-bahoaka ankehitriny izy ireo eh ? Tonga saina ihany koa satria toa lasa any amin’ny tsy izy ny Firenena ankehitriny eh! Minoa Ahy ianao fa ireo no hitroatra hanaraka antsika atsy ho atsy hanohitra ny tsy fahamarinana nasain’ny FAT nataony ary dia handresy isika. Tsy hitodika aty amintsika intsony ny vavabasy ary tsy hapoaka aty amintsika intsony ireo grenade mampandatsa-dranomaso. Minoa fotsiny ihany, ary mahareta amin’ny fivavahana fa hain’A/tra foana ny miahy antsika. Samia mahereza eh !
13 janvier 2011 à 21 h 37 min
Tena tohanaka ary taikao be ilay hevitrao, ary tena marina 100% ireo,
azo tsapain-tanana ny tq 2002, Dia i ratsiraka sy ireo alikany ve dia samy vaky nadositra nefa niseho azy ho dictateur raindahiny, namono olona sy nanao izay ho afany.
ny barrage tao bricakville, nanampy trotraka ny orambe, namindra ny foto-kazo teo ampovoan-dalana, vatolampy lehibe nifindra teo amorondalana, lasa tapak feno vohi-tany ny arabe rakotra efa ho 90km. Sakan ahtreo ny fanaovan trafiue essence tamatave-barrage brickaville, Ilay colonely Ben lade niseho ho dadany maty voatifitra .
Ny reservistes nanavotra ny vahoaka tany amin´ny sisin-tany tahaka nampian andriamanitra. Betsaka ny zava-niseh satria tamin´ireny fotoana ireny ,nivavaka isam-pokontany ny vahoaka,na andro na alina.
Eto isiska ahita tokoa fa efa betsaka ny signes amin´ny valim-bavaka,
I Goliath aza natsipin´i david kely.
Ny liona nikatom-bava teo anatrehaní daniela
ireo tanatara niseho ao amin´ny baiboly ireo anie ,ireo no fitrangan-javatra eto amin´ny fiainatsika olombelona, ka hamafiso ny vavaka sy finoana, fa lehibe ny Asan´ANDRIAMANITRA.
manohana an´i Rasoanaivo aho eto
Rasoanaivo> aleo ny vavaka ho an’ny olona resy lahatra amin’izany, fa manjary hivaona any amin’ny fisian’A/tra na ny tsy fisiany eo indray ny resaka. Izaho aloha dia tena resy lahatra tanteraka fa Andriamanitra dia miasa amin’izao crise mahazo antsika izao, saingy mety tsy ho arakaraky ny tiantsika ho tanteraka ny zava-mitranga dia miteny isika fa tsy miasa Andriamanitra.
Ary efa anisan’ny famaliana ataony ireny figadran’i Charles sy ny namany ireny, iza no nieritreritra izany 2 taona lasa izay? ka mahareta ry vahoaka malagasy fa Andriamanitra miasa amin’ny ora tiany hiasàna, tsy isika no hibaiko azy amin’izany, anjarantsika no mitalaho aminy, dia aoka izy no hiasa. Ary tadidio hatrany ity: Ny fihevitro tsy fihevitrareo. Ary ny famaliana ataony dia tsy azo ihodivirana na inona harena na inona pouvoir n’olombelona. Ny mety ho tian’i Kintana angamba dia hoe hahita varatra hilatsaka eo an-tampon-dohan’ireo FAT??? Aza matahotra fa tsy misy tsy ho tsaraina amin’ny nataony daholo ny « Olombelona rehetra ». samy hahazo ny valin’asany avy ireo tsy mataho-tody ireo, mety tsy ho anio, mety tsy ho rahampitso, fa ho avy ny andro…. Mila faharetana rehefa miara-miasa amin’Andriamanitra.
28 janvier 2011 à 9 h 29 min
tena tsara daholo ny hevitrareo , fa ny tsara indrindra de ny mametraka ny fiain’ny firenentsika ho eo ampelatanan’Andriamanitra
Ny marina tsy mba maty e
Précédent Article précédent : Cérémonie de vœux à Iavoloha, interdite pour les trois mouvances
Suivant Article suivant : Des inquiétudes par méfiance ou par ignorance ?